घरमा विरोधी सेल्युलाईट मालिश: को सुन्तला बोक्रा मार्न!
जब तपाईं ऐनामा हेर्न र चिल्लो र supple छाला भयानक धक्का सट्टा आफैलाई लागि देख्नुहुन्छ, तपाईं सधैंभरि आफ्नो दर्पण स्क्रीन रचनाहरू गर्न चाहन्छु। तर, यो किनभने जिल्ला सबैलाई आफ्नो आँखा बन्द गर्न नै स्क्रीन काम छैन, सेल्युलाईट को समस्या समाधान गर्दैन। सेल्युलाईट महिला केन्द्र विकास र कहिलेकाहीं तपाईं आफैलाई सोध्नुहोस्: हामी यस्तो भाग्य के हो? आखिर, मानिसहरू सेल्युलाईट धेरै कम बालिका प्रभावित छन्।
छोटकरीमा, शर्ट, स्कर्ट - यो सबै शरीर सुन्तला विपत्ति अंगभंग हुँदा, तपाईं को लागि छैन। तसर्थ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नैतिक आश्वासन समस्याको तुरून्त सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सबैलाई त्यो एउटा सानो सहरमा बसोबास भने, महंगा सैलून प्रक्रियाहरु धाउन मौका छ, वा, तपाईं एक राम्रो "विरोधी सेल्युलाईट विशेषज्ञ," जो मात्र उपचार पनि पाउन, तर स्वास्थ्य हानी छैन, गाह्रो छ। यसो गर्न हामी कसरी घर मा विरोधी-सेल्युलाईट मालिश गर्न यस लेखमा वर्णन।
डिब्बे प्रयोग मालिश: चयन गर्न के?
यो सेल्युलाईट 'मार्न' एक राम्रो तरिका हो। तपाईं आफ्नो कार्यान्वयन लागि आवश्यक कुराहरू फेला पार्न प्रयास गर्न धेरै आवश्यक छैन, त्यसैले यो प्रविधी मसाज र आहार को एक किलोमिटर लामो सूची रूपमा सबै विरोधी सेल्युलाईट महाकाव्य सबैभन्दा सरल सकिन्छ।
पहिले, घर मा विरोधी-सेल्युलाईट मालिश गर्न, तपाईं एक रबर टिप र एक गिलास सब्सट्रेट दुई फार्मेसी जार आवश्यक छ। म (एक योद्धा रूपमा, empirically यो प्रक्रिया परीक्षण छ) सुझाव बैंकहरू को ठीक यस प्रकार, तिनीहरूले प्लास्टिक, अब जीवन भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ किनकी, पाठ्यक्रम, शरीर संग सम्पर्क मा छ जो जग, ग्लास बनेको छ किनभने किन्न र, जो गैर-विषाक्त (प्लास्टिक गर्न विरोध रूपमा)।
एक पटक तपाईं पायो गर्नुभएको बैंकहरू पदार्थ (आधार), बैंक मालिश समयमा शरीरमा धकेल्न गर्न अनुमति दिन्छ जो खरीद गर्नुपर्छ।
घर सेल्युलाईट मालिश: एक आधार चयन
यसैले, संगठित गर्न विरोधी सेल्युलाईट मालिश घर मा, हामी फार्मेसी बैंकहरू र केही आधार, बैंकहरू छाला मा सजिलै सार्न आवश्यक छ किनभने आवश्यक छ। यी उद्देश्यका लागि, तपाईं कुनै पनि विरोधी सेल्युलाईट क्रीम, औषधि पसल बिक्रि छ जो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अवशोषित छैन जो छ तुरुन्तै, तपाईं विरोधी सेल्युलाईट तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तरल तर, को आर्सनलमा पर्याप्त छैन भने गर्छन्। यी समावेश सुन्तला तेल, सुन्तले रङ र कागति। निस्सन्देह, विरोधी-सेल्युलाईट तेल एक बिट थप, तर अरूलाई छाला, एक ठंडा प्रभाव, वा विपरित, वार्मिंग सिर्जना असर गर्छ। तर, यस्तो भारी तेल छाला मा केंद्रित फारममा भिजेको। बेचैनी साथै, यो आफ्नो शरीर गर्न हानि हुन सक्छ, त्यसैले तिनीहरू र विरोधी सेल्युलाईट जटिल समावेश भने, यो "तटस्थ" तेल संग पतला हुनुपर्छ।
घरमा विरोधी सेल्युलाईट मालिश प्रयोग डिब्बे बनाउन, तपाईंले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ बच्चा तेल वा पारंपरिक मालिश। द्वारा र ठूलो छ, यसलाई भनेर जग छुटकारा कुरा छैन, किनभने धेरै प्रविधी मा डिब्बे को मद्दत एक मालिश को सार।
मालिश प्रविधी सेल्युलाईट विरुद्ध
हामी, एक जार लिन उनको रबर भाग मा दबाव राख्नु र बिस्तारै सेल्युलाईट संग क्षेत्र लागू गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि रबर को जाने, र तपाईं बैंक "चूसा" भनेर हेर्न हुनेछ। कि पछि, समस्या क्षेत्र मा बैंकहरू ड्राइव सुरु गर्नुहोस्। को खुट्टा र नितम्ब यस क्षेत्र, त तपाईं यो आन्दोलन लसीका को खण्ड संग समन्वित गरिनेछ किनभने, तल माथि देखि जार चलाउनु छ भने। को चाक मा बनाउन एक परिपत्र गति गर्न सक्छन्। त्यसैले दुई तीन हप्तासम्म हरेक अर्को दिन 15-20 मिनेट जारी। ठीक कार्यान्वयन गर्दा दोस्रो वा तेस्रो हप्ता प्रदर्शित हुनेछ असर। तसर्थ, हामी देख्न, के विरोधी सेल्युलाईट मालिश घरमा गर्न गाह्रो छैन, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा लगनशील भई लागिरहेमा र लगनशील भई लागिरहेमा छ!
यो मालिश छैन फुलेको नसाहरु वा जो भास्कुलर सिस्टम को अन्य रोगहरु छ संग मान्छे को लागि गर्न सकिन्छ। मालिश को भुँडी मा प्रदर्शन गर्न अवांछनीय छ, र कडाई निषेधित छ लागि मालिश नितम्ब को असर भित्री जांघ (को कमर र तिध्रा बिचको भाग मा)।
गहिरो लेजर बाल हटाउने बिकनी: प्रक्रिया र मूल्य को प्रभावकारिता को समीक्षा
धार्मिक टैटू के अर्थ हो?
आफ्नो खुट्टा मा महिला टाटु: के भाग राम्रो?
चम्चा Uno - सफाई अनुहार लागि अर्को उपकरण
Cosmetology: अनुहारको रुप रंग, आफ्नो प्रकार र हेरविचार को आधारभूत नियमहरू
Chitin - यो के हो? chitin को आवेदन
दबाइ 'Aerius': प्रयोगको लागि निर्देशन
को 9th ग्रेड मा क्लास घण्टा: विषयहरू र परिदृश्य। कसरी वर्ग9मा एक सुन्दर घण्टा "सहनशीलता" खर्च गर्न
रेस्टुरेन्ट "Aist" (मास्को, मलाया Bronnaya): वर्णन, मेनु, समीक्षा
को गर्भाशय हटाउन सञ्चालन
अमेरिकी व्यायाम गर्ने व्यक्ति Gabby डगलस जीवनी र तीन ओलम्पिक च्याम्पियन को उपलब्धिहरू
बीमा संगठन को दिवालियापन: विशेष गरी प्रक्रिया
गर्भावस्था को समयमा Sanorin। म यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?